कहिले सम्म रुनुपर्ने हो, कृषिप्रधान देशका किसानले ? (भिडियाेसहित) | ईमाउण्टेन समाचार
कार्तिक ४, २०७८ पढ्न २ मिनेट
काठमाडाैं । पछिल्लो समय समाजीक सञ्जाल देखि सञ्चार माध्यमसम्म रुदै गरेका किसानहरुका तस्बीरले राम्रै स्थान ओगटेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि धानबाली नष्ट भएका किसानहरुलाई राहत दिनु पर्ने माग सरकार समक्ष गरिरहेका छन । प्रधानमन्त्री प्रभावित क्षेत्रको अवलोक गर्न गएका छन् । यी सबै परिदृष्य हेर्दा किसान प्रति चौतर्फी रुपमा सहानुभुती बढ्दै गएको छ । तर सधै राज्यबाट उपेक्षित किसानहरुले यस पटक उचित क्षतीपुर्ति पाउलान त? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
देश/समाज, भिडियो‐मा वर्गिकृतkishan, mountaintv
कैलाली–अत्तरीया–मोहना छ लेन सडक खण्ड अस्तव्यस्त
नवलपरासीका दुबै क्षेत्रमा कांग्रेसको अग्रता, कसको मत कति ?
झन् रोचक बन्दै वीरगन्जको मतपरिणाम, कांग्रेसलाई उछिन्दै राजपाले बढायो मतान्तर
असोज ४, २०७४
रौतहटको चन्द्रपुरमा माओवादी अगाडी (मत परिणामसहित)
मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु
गर्मी बढेसँगै जनजीवन प्रभावित